Ismiidaamin Buuhoodle iyo Cabdifataax Rotman oo qaraxa ku dhintay – Radio Daljir
Ismiidaamin Buuhoodle iyo Cabdifataax Rotman oo qaraxa ku dhintay
Agoosto 1, 2018 6:21 g 0
Waxaa loo malaynayaa in bartilmaameedku ahaa masuuliyiinta baabuurka saaraa oo kala ah:
Cabdifataax Maxamed Cali (Rotman) oo soo noqday lataliyaha Ra’isal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo arimaha siyaasada uu kala talin jirey,
Axmed Maxamuud Doolaal oo ahaa wasiirkii hore ee armaha gudaha Khaatumo iyo
Col Cabdiraxmaan Cabdilaahi Axmed Nuur (Afweyne) oo kamid ah saraakiisha ciidamada Puntland ee gobolka Cayn.
Baabuurka ayuu is-hortaagey naftihalligaha qaraxa fuliyey, kadibna baabuurka ayaa istaagey, sidaas ayuuna isugu qarxiyey baabuurka.
Khaasare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa. Illaa hadda waxaa la xaqiijiyey geerida AUN Cabdifataax Maxamed Cali (Ina Rotman) iyo Axmed Maxamuud Doolaal oo soo noqday wasiirkii arimaha gudaha Khaatumo.
Waxaa la helay maydka qofka loo malaynayo in uu isqarxiyey oo wajigiisu badqabo, halka jidhkiisa kale googo’ay walina ma jirto cid aqoonsatay qofka uu yahay wajigan la helay ee qofka wax qarxiyey.
Waxaa dhaawac sahlan uu soo gaarey Yuusuf Cismaan Baxnaan (Dhagcas) oo kamid ah odayaasha deegaanka sida weyn looga yaqaano, iyo Col Cabdiraxmaan Afweyne oo isagu dhaawac sahlan qaba. Darawalkii baabuurka masuuliyiinta waday ayaa asna badqaba.
Buuhoode loogama baran falalka noocan ah bulshada ayayna anfariir ku noqotay dhacdadan aadka looga naxay. Waxaa ay kumanaan qof buuxdhaafiyeen meesha qaraxu ka dhacay iyada oo markii danbe ciidamada ammaanku ay rasaas ku kala didiyeen dadka meesha isa soo dhoobay.
faahfaahino dheeraad ah kala soco wararka danbe ee Radio Daljir.
Cabdifataax ina Rotman iyo Axmed Maxamuud Doolaal oo ku dhintay Qaraxa Buuhoodle (dhegayso)
Islaan Bashiir, Dekedda Garacad & Farmaajo: “Waxaan la hadlay oo afkeyga kula hadlay Farmaajo, wuu soodhaweeyey … wuxuu igu yiri waxaa idiin imaanaya RW Kheyre” (daawo)